रियल सोसाइडाड विरुद्ध मेस्सीको दिन खराब हुनेछ : इमानोल अल्गुवासिल - Experience Best News from Nepal
रियल सोसाइडाड विरुद्ध मेस्सीको दिन खराब हुनेछ : इमानोल अल्गुवासिल
प्रकाशित मिति : शनि, मंसिर २८, २०७६
ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोना र रियल सोसाईडाड आज राति भिड्दै छन् तर रियलका प्रशिक्षक इमानोलले मेस्सीलाई रोक्न सक्ने कुनै उपाय नरहेको बताए । मेस्सीलाई रोक्न नसके पनि आज मेस्सीको दिन भने खराब रहने प्रशिक्षकको भनाई रहेको छ ।
बार्सिलोनाको खेल स्तरमा निकै सुधार आएकै बेला सोसाईडाडसंगको भिडन्त रोमान्चक हुने देखिन्छ किनकि बार्सिलोना आज पाहुना बनेर रियलको घरेलु मैदानमा भिड्दै छ । रियल हाल ला लिगा अंक तालिकाको चौथो स्थानमा आवर्द रहेको छ । इमानोल अल्गुवासिलले आफ्नो टिमको राम्रो पहिचान त् गरे कै छन् तर रोक्न नसकिने मेस्सी प्रति भने उनी सकारात्मक नरहेको देखिन्छ ।
प्रशिक्षकले आज मेस्सीलाई रोक्ने कुनै पनि उपाय नरहेको र मेस्सिले बलियो प्रतिद्वन्दी र राम्रा प्रशिक्षकको सामना गरिसकेको बताए । उनले मेस्सीको आजको दिन खराब हुने आशा रहेको ब्यक्त गरेका थिए ।
मध्य साता मेस्सीलाई आराम दिइएको थियो जसको कारण आज मेस्सी निकै ताजा र स्वस्थ देखिनेछन् जसको फलत मेस्सीले आफ्नो पूर्ण खेल पस्कन सक्छन । बार्सिलोनाको अन्तिम १३ खेलमा मेस्सीले १४ गोल र ८ एस्सिस्ट गरिसकेका छन् । आज बार्सिलोना र रियलको खेल ८:४५ बजे एनोइटामा हुनेछ ।
हारमा प्रशिक्षकको भन्दा हाम्रै दोष : स्वारेज !!
एट्लेटिको मड्रिड फाइनलमा !!